Inqaba sinombuki zindwendwe onguSharon
Indawo yabucala, eqinisekisiweyo ye-eco-certified oasis ethe ntsho kwihlathi lemvula eliqatywe lilanga, iMisty Mountains Homestead ibonelela ngokubaleka okuzolileyo kwimihla ngemihla. Ngelixa kuphela imizuzu engama-40 ukusuka eCairns kunye neyure ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseCairns, le ndawo yokuzimela yamkelekile ivakala ngathi ikwilizwe elilodwa, ngaphandle kokuncama nayiphi na imod-cons.
Igumbi lokulala leMisty Mountains Homestead elinamagumbi amahlanu anazo zonke izinto ezenziwayo zokubaleka kwezothando. Imizuzwana nje ukusuka kwimimangaliso yendalo yaseTropiki kuMntla weQueensland (kubandakanya iGreat Barrier Reef), sisiseko esifanelekileyo sohambo lwakho olunomdla. Kodwa ngeempawu ezimangalisayo njengeendawo zokuzonwabisa ezinesitayile kunye nokubuyela ngasese ezandleni zakho, unokungafuni ukuhamba…
Le Ihotele yangoko nangoko ibonwa kwiNetflix, ayibonisi kuphela indawo yasekhaya enamava asekelwe kwindalo yokuba kwihlathi lemvula lamandulo, unoluhlu lwasimahla lweenkukhu zokuqokelela amaqanda kwimithi yeziqhamo ezitsha ukungcamla xa ngexesha lonyaka, indawo yangasemva IMount Bellenden Ker emangalisayo, enehekthare ezingama-52 zehlathi lemvula elimsulwa ngokwenene le yindalo emangalisayo. Imijelo yamanzi eNtabeni eNtsha kunye neendlela zokuhamba intaba yenza oku kube liqela eligqibeleleyo, usapho okanye ukuhlala komtshato.
Siku 2.5 km kude noyena mmelwane ukufutshane, njengoko simi kumazantsi eMount Bellenden Ker kwaye singabamelwane beWooroonooran National Park ngoko akukho zithintelo zeNgxolo. Sinikezela ngamava endalo kunye neentuthuzelo ezenza ukuba uhlale ukhululekile.
Samkela kuphela ukubhukisha ngamaxesha angaphambi kokufika acwangcisiweyo. Singaqhagamshelwa ku +61408903104, iofisi ithi 07 40675311 kunye ne-imeyile ithi sharon@romanticretreats.com.au
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$703